Madaxweyne Siilaanyo Iyo Wefdigiisa Ku Wajahan Dalalka Ethopia Iyo China Oo Ka Duulay Madaarka Ka Dib Muran Qaatay Saacado Iyo Sababaha Lala Xidhiidhiyay Inay Caawa Ku Negaadaan Dirirdhaba – Araweelo News Network (Archive)
Madaxweyne Siilaanyo Iyo Wefdigiisa Ku Wajahan Dalalka Ethopia Iyo China Oo Ka Duulay Madaarka Ka Dib Muran Qaatay Saacado Iyo Sababaha Lala Xidhiidhiyay Inay Caawa Ku Negaadaan Dirirdhaba
Hargeysa(ANN)Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) iyo wefti balaadhan oo uu hoggaaminayo ayaa maanta socdaal shaqo ugu kicitimay dalalka Ethiopia iyo China.Madaxweyne Siilaanyo iyo wetigiisa oo galabta ka dhoofay madaarka
caalamiga ah ee Magaalada Hargeysa. kadib muran saacado kooban qaatay
waxa socdaalkiisa ku wehelinayay Marwada koowaad Aamina Sh. Maxamed Jirde, Wasiirrada Beeraha, Macdanta iyo Biyaha, Madaxtooyada, Arrimaha dibada iyo Maareeyaha Dekedda Berbera.
“Madaxweynaha Somaliland iyo weftiga uu Hoggaaminayay ee galabta ka ambo baxay madaarka Hargeysa waxa socdaalkoodu ku siman yahay illaa dalka Shiinaha waxaanay sii marayaan Ethopia oo ay ku hakanayaan wax aan ka badnayn maalin, ka dibna waxay u gudbayaan dalka China,”ayuu yidhi Af-hayeenka Madaxtooyada Somaliland Cabdilaahi Maxamed Daahir (Cukuse) oo ka warbixinayay socdaalka Madaxweynaha.
Waxaanu isagoo ka hadlaya ujeedada socdaalka wefdiga Madaxweynaha yidhi, “Ujeedada socdaalka weftigani waxay daba socotaa xidhiidh u socday labada wadan iyo wada hadallo ay yeesheen mudadii sanadka ahayd ee xukuumaddu jirtay.”
“China waxa uu ka mid tahay meelaha uu khudbaddii sanadka uu ku xusay markii uun la hadlayay Goleyaasha, China waa dal weyn oo dihin. Waa dal weyn oo ka mid ah dunida horumartay dhinaca dhaqaalaha iyo farsamadda. Waana dal wax ka tari kara wax badan oo baahiyaheena ka mid ah,”ayuu yidhi Af-hayeenku.
Mr. Cukuse waxa uu sheegay in socdaalka Madaxweynuhu la xidhiidho sidii dalka China uu Somaliland uga taageeri lahaa dhinaca farsamada lagaga faa’iidaysanayo khayraadka dabiiciga ah sida shiidaalka, Biyaha, Beeraha.
“Waxa kale oo ay weftigu u tegayaan sidii ay maalgashi uga soo heli lahaayeen sharaa’iga waaweyn ee dalkaa iyo sidoo kale China oo dalka hore uga caawin jiray dhinaca biyaha iyo Wadooyinka inay mar labaad doorkeedii qaadato ayaanu rajaynaynaa,”ayuu yidhi Af-hayeenka Madaxtooyadu.
Madaxweynaha Somaliland waxa Madaarka ku sii sagootiyay Madaxweyne Ku xigeenka Somalland C/raxmaan C/llaahi Ismaaciil (Saylici) Wasiirro ka tirsan xukuumadda iyo
Guddoomiyaha xisbul xaakimka tallada haya ee KULMIYE Muuse Biixi Cabdi, iyadoo Madaxweynuhu ka hor intii aanu ka dhoofin madaarka salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka qaranka Somaliland.
Dhinaca kale Diyaarada qaadaysay wefdiga Madaxweynaha oo dalka Ethiopia usoo diray ayaa maanta duhurkii soo fadhiisatay Madaarka magaalada Hargeysa, balse wefdiga ayaa ka duulay halkaa galabnimadii. Kadib markii sida ay shebekada wararka ee Araweelonews u xaqiijiyeen dad goob joog ahi muran iyo khilaaf hakiyay wefdiga Madaxweynaha uu ka dhacay Madaarka, iyadoo sida ay xoggahaasi tibaaxeen ay sabab u ahayd xiligii la filayay inay wefdiga Madaxweynuhu baxaan oo dib u dhac ku yimi. laakiin wararka qaar ayaa sheegaya in madaxweynuhu doonayay ka hor inta aanu kadhoofin dalka inuu kulan laqaato ergayga qaramada midoobay u qaabilsan Somalia iyo Somaliland Mahinga, kaas oo ay wefdiga isku weydaarteen galabta madaarka hargeysa. sida ay sheegayaa wararka u dhuun daloola wefdiga madaxweynaha dib u dhacaa ayaa sababay inuu Bayloodka Diyaaradu ku dooday in aanu haddii gabalku dhaco fadhiisan Karin Madaarka weyn ee Addis Ababa. Sidaa awgeed ay wefdiga madaxweynuhu kala doortaan inuu caawa u hoydo Hargeysa subaxnimadana uu ka baxo, ama ay caawa seexdaan Dirirdhaba oo aanu dhaafi Karin, balse ay taa ku gacan saydheen wefdiga xukuumadda Somaliland ee Madaxweyne Siilaanyo hogaaminayay, isla markaana muran qaatay ku dhowaad saacad ka dib wefdigu ku qanciyeen inay la hadlayaan Madaxda Ethiopia oo aanay suurta gal ahayn in Madaxweynaha iyo wefdigiisu dib uga dhacaan safarkooda ay dalka Ethiopia u dhaafayaan dhinaca dalka China. Laakiin diyaarada ayaa kacday xili danbe, waxayna wararka la xidhiidha socdaalka wefdiga Madaxweynaha Somaliland sheegayaan inay wefdigu caawa u hoydeen magaalada Dirir-dhaba, halkaas oo ay subaxnimada ka duulayaan iyagoo ka degaya Addis ababa si ay safarkooda u sii wataan.
Madaxweyne Siilaanyo Oo Magcaabay Gudida Tacliinta Sare Ee Dalka